औषधिको सट्टा खेतवारीमा रक्सी ..! Archives - Nepal Japan
नेपाली समय : 01:17:47
जापानी समय : 04:32:47
Tag: औषधिको सट्टा खेतवारीमा रक्सी ..!
औषधिको सट्टा खेतवारीमा रक्सी ..!
Posted on March 4, 2017 by Yadav Devkota
भारतको जयपुरस्थित शेखावटी भन्ने गाउँका मानिसहरुले खेतबारीमा लगाएका बालीनालीलाई रोग तथा किराबाट बचाउनका लागि किटनाशक औषधिको साटो घरेलु तथा विदेशी रक्सी बालीनालीमा छर्कने गरेका छन् ।
गाउँलेहरुले यसरी बालीलाई रक्सीले नुहाइदिनुका दुुई कारण छन् । पहिलो त, बजारमा किटनाशक औषधिको भाउ निकै चर्को छ । अनि दोश्रो कारण बालीनालीमा रक्सीको प्रयोग गर्नाले रोगकिरा नलाग्ने मात्र होइन उत्पादन पनि बढिरहेको छ ।
रक्सीले सिँचाई गर्नाले बालीनालीको उत्पादन बढेको दाबी किसानहरुको भएतापनि विज्ञहरुले भने रक्सी र उत्पादन वृद्धिको बीचमा कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गर्दछन् ।
किसानहरुका अनुसार आधा बिगाह खेतका लागि केवल २५ देखि ३० मिलिटिर रक्सी पर्याप्त हुन्छ । अधिकांश किसानहरु ११ देखि १६ लिटरको स्प्रे मेसिनमा १ सय मिलि लिटरसम्म रक्सी हाली त्यसमा पानी थपेर बालीनालीमा छर्किन्छन् । यसो गर्दा किटनासक औषधि किन्नुुभन्दा निकै सस्तो पर्ने र बालीको उत्पादन पनि बढि हुने किसानहरु बताउँछन् ।
Posted in बिचित्रTagged औषधिको सट्टा खेतवारीमा रक्सी ..!